……त्यसपछि उनको निधन भयो ! – Jagaran Nepal
……त्यसपछि उनको निधन भयो !
कर्णालीमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुँदा त्यहाँ बसेका व्यक्तिको ज्यानै जान थालेको छ। रोगबाट जोगाउन र सुरक्षित राख्न बनाइएका अधिकांश क्वारेन्टाइनले नै ‘मान्छे खान’ अर्थात् ज्यान लिन थालेका हुन्।भारतबाट फर्किएका दैलेख दुल्लुका कर्णबहादुर थापा पनि घर पुग्न पाएनन्। नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमै जेठ १७ गते उनको मृत्यु भयो। क्वारेन्टाइनमै थुनेर राखिएको र उपचार तथा खानपानमा बेवास्ता गरिएपछि अकालमै उनको ज्यान गएको आफन्तको भनाइ छ।
व्यवस्थापन, खानपान, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा लापरवाही हुँदा क्वारेन्टाइन असुरक्षित देखिएका छन्। जाजरकोटमा त बाहिरबाट आउने स्थानीयलाई ओडारमा राखिएको छ। यसले त्यहाँ बस्नेहरू थप असुरक्षित बनेका छन्। क्वारेन्टाइनमा आवश्यक रेखदेख र स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही हुँदा सुर्खेतमा पनि एक युवाले ज्यान गुमाए। पञ्चपुरी नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको क्वारेन्टाइनबाट घर पठाएकै दिन निधन भयो। मृतकका आफन्त भन्छन्, ‘रोगबाट बचाउन बनाएको भन्छन्, बजेट पनि खर्च गरेका छन्। तर, त्यस्ता मान्छे खाने क्वारेन्टाइन बनाउनेलाई कसले कारबाही गर्ने ? क्वारेन्टाइन भन्ने मात्र हुन्, मान्छेका काल बनेका छन्।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा ललितबहादुर बुढाले लेखेका छन् ।